ကလေးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဖျော်ရည်များ - Hello Sayarwon
ကလေးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့အစားအစာတွေကျွေးဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့ဖျော်ရည်တွေ တိုက်ဖို့ကရော- ကလေးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ သောက်စရာတွေများပါတယ်။ ဥပမာ – အသီးဖျော်ရည်၊ Smoothies တွေကနေစလို့ နွားနို့တွေ၊ ပဲနို့တွေ အထိပေါ့။ ဒီအဖျော်ရည်တွေဟာ အရိုးကြီးထွားမှုအတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်တွေ၊ စွမ်းအင်တွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ခုခံအားစနစ်အတွက် ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကိုပေးစွမ်းပြီး ကလေးရဲ့ကြီးထွားမှုနှုန်းကို သိသိသာသာဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ရေကိုတော့ ဘယ်အရာကမှအစားထိုးလို့မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရေက ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်တွေ၊ အစိုဓါတ်တွေကို ထိန်းညှိပေးပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းတွေနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းတွေကို ကယ်လိုရီတွေ သကြားတွေမပါဘဲ အလိုလို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ရေဟာ ကလေးတွေရဲ့သွားတွေအတွက် အထူးအရေးကြီးတဲ့ ဖလိုရိုက် ရင်းမြစ်ကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိဘတွေဟာ ကလေးတွေ ရေပိုသောက်အောင် တိုက်တွန်းတာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။
နွားနို့ဟာ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင် ဒီ၊ ပရိုတိန်းနဲ့ ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ အရေးကြီးအာဟာရဓါတ်တွေရနိုင်တဲ့ ရင်းမြစ်ကောင်းတစ်ခုပါ။ တစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အဝလွန်ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ မရှိမချင်း သန့်စင်တဲ့နွားနို့ကို သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ၂နှစ်အထက်ကလေးတွေအတွက်တော့ အဆီနည်းနွားနို့ကို တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်။ မိဘတွေက ကလေးတွေကိုနေ့တိုင်းနွားနို့တွေအများကြီးတိုက်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုသာလုပ်မယ်ဆိုရင် အစာထပ်စားနိုင်ဖို့အတွက် ခက်ခဲနိုင်လို့ပါ။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ နို့ထွက်ပစ္စည်းအများစုမှာ ပါဝင်တဲ့အာဟာရဓါတ်တွေဟာ နွားနို့မှာ ရနိုင်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အချို့မှာတော့ ဗီတာမင် ဒီလုံလုံလောက်လောက်မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိဘတွေဟာကလေးအတွက် ပစ္စည်းအမျိုးအစားရွေးချယ်ဖို့ မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ ပါဝင်တဲ့အာဟာရစာရင်းကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့သော ပစ္စည်းတွေမှာတော့ ကလေးရဲ့ အစာချေစနစ်ကို အကျိုးပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေပါဝင်ပြီး သူတို့ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးမယ့် ဘက်တီးရီးယားတွေရန်ကနေလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ပဲနို့မှာ ပြည့်ဝဆီမပါဝင်သလို ကိုလက်စထရောလည်းမပါပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါဟာ ကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ပဲနို့ရဲ့ ပြဿနာက နွားနို့လောက ်အာဟာရဓါတ်မပါတာပါပဲ။ တကယ်လို့ မိခင်က ကလေးအတွက် နွားနို့အစား ပဲနို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေကို ကျွေးတဲ့အာဟာရထဲမှာ ဗီတာမင်တွေကို ပိုထည့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အသီးဖျော်ရည်တွေဟာ ကလေးရဲ့ခန္ဓါကိုယ်အတွက် အာဟာရဓါတ်တွေ၊ ဗီတာမင်တွေနဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းကိုပြေပျောက်စေပြီး ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အပြင် ကလေးရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုပိုကောင်းအောင်လည်း လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ဘလက်ဘယ်ရီ၊စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလူးဘယ်ရီ စတဲ့ ဘယ်ရီသီးတွေမှာ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေအပြင် DHA ပါဝင်မှုလည်းများပါတယ်။ DHAက docosahexaenoic acid လို့ခေါ်တဲ့omega-3 fatty acid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အမြင်အာရုံနဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ကယ်လ်စီယမ်လိုအပ်သလို ဦးနှောက်အတွက် DHA လိုအပ်ပါတယ်။
အဖျော်ရည်တွေဟာ ကလေးရဲ့ခန္ဓါကိုယ်အတွက် ရေဓါတ်ကို အလုံအလောက်ပေးနိုင်ရုံတင်မက ကလေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခြားသော မရှိမဖြစ်အာဟာရဓါတ်တွေကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Healthy drinks for kids. http://kidshealth.org/en/parents/drink-healthy.html. Accessed on December 12, 2016
ကလေးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ စားသောက်တတ်ဖို့သင်ပေးမယ့် ဖေဖေမေမေတို့ သတိပြုစရာအချက်များ
ကလေးခန္ဓါကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်သောအာဟာရများနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများ